ओमकार टाइम्स भोलि अर्थात असार पन्ध्र, सरकारले दिने भयो सार्बजनिक बिदा तर कहाँ ? पढ्नुहोस – OMKARTIMES
भोलि अर्थात असार पन्ध्र, सरकारले दिने भयो सार्बजनिक बिदा तर कहाँ ? पढ्नुहोस
काठमाडौ । अहिले विभिन्न विशेष अवस्थाहरुमा आकस्मीक सार्वजनिक विदाहरु पनि परिरहेका छन् ।
संविधानले दिएको अधिकारको प्रयोगरि स्थानिय तहहरुले आफ्नो आकस्मिकता र आवस्यकताका आधारमा सार्वजनिक विदा दिँदै आएका छन् । सोहि अनुरुप भोली अर्थात असार १५ गते हुम्लाको खार्पुनाथ गाँउपालिकाले गाउँपालिकाभरी विदा दिने निर्णय गरेको छ ।
केही दिन अघि जिप दुर्घटनमा परि गाँउपालिका उपाध्यक्ष सहित ९ जनाको ज्यान गएको शोकमा खार्पुनाथा गाउँपालीकाले भोली शोक सभा सहित शोक विदा दिने निर्णय गरेको हो ।
जिप दुर्घटनामा परि गाउँपालिका उपाध्यक्ष सहित ९ जना हालसम्म पनि वेपत्ता भएको दुःखद् घडिमा हुम्ला जिल्लाको खार्पुनाथ गाउँकार्यपालिकाको आकष्मिक बैठक बसेर असार १५ गतेका दिन शोक सभासहित गाउँपालिका भित्र रहेका सम्पूर्ण विद्यालय तथा सरकारी कार्यलय १ दिनको लागि बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो ।
गाउँपालिका अध्यक्ष कर्ण बाहादुर रावलको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले कर्णालीमा खसेको २ दिन भई सकेको र बेपत्ता सबैको मृत्यु भईसकेको भन्दै उक्त निर्णय गरेको हो ।
दुर्घटनाले गाउँपालिका शोकमा डुबेको छ । उक्त बैठकले खार्पुनाथ गाउँकार्यपालिकाले १३ दिन सम्म कुनै पनि औपचारीक कार्यक्रम नगर्ने र मृतक १० जनाकै परिवारलाई क्रिया खर्चवापत दशहजार रकम दिने घोषणा गरेको छ ।